श्री ६ को यो गाडीको बारेमा म आफैं यौटा पोष्ट लेख्नेवाला थिएँ, तपाईले लेखी हाल्नु भएछ।
पहिला स्वास्नि छोरा-छोरी, साला भतिजाको उद्दार, अनी कति पर्ने कलम, घडी र सवा लाखको पलंग हुँदै भित्रीन लागेको यो गाडी देखेर मलाई भने कुनै अचम्म लागेन।
भर्खरै दिमागमा यौटै कुरा आईरहेको थीयो "हैन नेपालीले राजालाई किन निकालेको?" । जबाफ तुरुन्तै पाएँ, नेपालीले राजतन्त्र फ्याँकेका हैन रहेछन, खाली राजा मात्रै फेरेका रहेछन । अब यी सर्बहारा नै यसरी बजेटमारा भएर निस्केपछि त अहिले मलाई यि नया राजा भन्दा त बरु पुरानै राजा ठीक थिए जस्तो लाग्दैछ ।
अब केहि दिन वा हप्तामा प्रधानमन्त्रीको लागी कुनै नयाँ ठाँउमा कार्यालय सहितको दरवार बनाउने र हालका प्रधानमन्त्री पछि उनका जेठा छोरा स्वत: प्रधानमन्त्री हुने नियम बनेमा पनि ठरकी दादालाई भने अचम्म लाग्ने छैन। (खै के भा हो, यो खबर सुने देखी जाँडले पनि लाग्न छाड्या छ!)
केही समयसम्म नेपालमा बसेर माओवादीको रमिता हेरेर आएको थिएँ । माओवादी कम्युनिष्टको नाममा बेइज्जत हुन भन्ने कुरामा शंका रहेन किनभने उनीहरूको जीवन विलाशिता र ऐशआरामको पर्याय बनेको छ ।
सारा मुलुकभरका ठेक्कापट्टा, प्राकृतिक स्रोत, घडेरी र जग्गा व्यवसाय, शेयर मार्केट, गूण्डागर्दीको एकल ठेकेदारी सरकारमा रहेको माओवादीको वपौति रहेको मैले देखेँ त्यहाँ । प्रचण्ड त यतिसम्म विलाशी भएको कुरा मैले सुनेको थिएँ कि कतिपय कुरा यहाँ लेख्न पनि लाज लागेर आउँछ ।
सर्वहाराका नेता, निजि सम्पत्ति नराख्ने एलानका वीच प्रचण्डको घडि, पलङ र करोडौँको गाडीको कथाले उनी चाउचेस्कू बन्न बिघ्न आतुर छन भन्ने देखाउँछ । यही हो power corrupts and absolute power corrupts absolutely को कमिनिष्टिय उदाहरण ।
ठाकुर् दादाले श्री ६ दिनु भयछ। म यो सरकारलाई कती श्री दिनि भन्नि कुर खोज्दै थिएं र श्री को खोजीमा एउटा लेख लेखिदींए। के गर्नु नेपालमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेक हुन्छन्। पहिले पाजेरो चड्थे अब टोयोट ल्यान्ड क्रुजर्। अधिरजकुमर हुंदा हर्ली डेभिशन। को भन्दा को कम छन् र? बटो बनाउन जापान र चाइना छदैछ अघुडाउन सरकार जस्को त्यो आइ हाल्छ नया नया गडि लीएर। नेपाली जनता सधैं मर्कामा।
i wrote one poem based on your article .... padnu hola....yo kabita ko lagi prerana tapai ko yo leekh nai ho....Dhanyabhaad...